Maxaa lagu arkaa Kobanheegan | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Copenhagen, Maxaa la arkaa
Maanta wadamada Waqooyiga Yurub waxay ku jiraan moodo. Shineemo, taxane, gastronomy ... waxwalba waxay noo horseedaan inaan rabno inaan ogaano wadamadan nidaamsan, oo leh nidaam waxbarasho oo wanaagsan, dowlad jirta iyo dhaqaale xasilan. Tusaale ahaan, Denmark
Caasimaddu waa Copenhagen, asal ahaan qarnigii XNUMXaad tuulada kalluumeysiga Viking.Maanta waxaan dooneynaa inaan ogaanno maxaan ka qaban karnaa magaaladan yar, midab leh oo qurux badan waqooyiga Yurub.
2 Maxaa lagu arkaa Kobanheegan 3 maalmood gudahood
Waxay kaabiga ku haysaa xeebta jasiiradda Zealand waxayna degtaa qayb ka mid ah jasiiradda Amager. Ka fiirso Marinka Oresund, dhinaca kale waa Sweden iyo magaalada Malmo. Waxay leedahay xaafado woqooyi ah, dabaqadda sare, xaafadaha woqooyi galbeed oo ay deggan yihiin in kabadan ama ka yar dabaqadda dhexe iyo kuwa kale oo warshado badan leh ama ay ku nool yihiin dadka dakhligoodu hooseeyo.
Marka la tiriyo dadka ku nool degmooyinka, waxaa lagu qiyaasaa in caasimada Denmark ay ku nool yihiin hareeraheeda 1.800.000 kun oo qof. Dad badan ayaa halkan ku nool, in ka yar 33% tirada guud ee dadka dalka ku nool.
Maxaa lagu arkaa Kobanheegan 3 maalmood gudahood
Waxaan ku bilaabi karnaa xoogaa hawo nadiif ah. Sidaas darteed, inta lagu jiro maalinta koowaad waxaan kugula talinayaa booqashada Tivoli Gardens, Beer madadaalo oo soo jiidata dadka da 'kasta leh. Waxay ku taal meel daqiiqado yar u jirta Xarunta Dawladda Hoose iyo Saldhigga Dhexe. Goobta ayaa laga furay 1843 waxayna umuuqataa in Hans Christian Andersen uu marar badan booqday.
Jardiinooyinka Tivoli waxay leeyihiin a naqshadaha cajiibka ah, dhismayaasha taariikhiga ah iyo jardiinooyinka cagaaran. Soojiidashada ayaa u dhigma soo jiidashada taariikhiga ah laakiin waxaa jira waxyaabo cusub oo casri ah sida cajiibka ah kabaha duubista, vertigo, taas oo kugu wareejinaysa 100 kiilomitir saacaddii, tusaale ahaan, ama Jinni, rooti jilicsan oo farshaxan dijitaal ah la dhisay iyo khiyaali ah halyeeyada Shiinaha oo leh dawacooyin. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira midkii hore, kan laga soo bilaabo 1914, oo ah mid ka mid ah toddobada kaliya ee xeebta ku leh bareeg gaari kasta ...
Halkan waxaad ku qaadan kartaa wakhti fiican. Dhanka kale, jardiinooyinka waxaa ku yaal meelo badan oo loogu talagalay qurxinta iyo dukaamada aad ku cuni karto cunnooyinka Aasiya ama Daanishka ama Faransiiska. Xitaa waxaa jira makhaayad leh cunto kariye la aqoonsan yahay Michelin. Mana jirto hudheelo, muusikada tooska ah xagaaga iyo waxqabadyo badan xilli kasta oo sanadka ka mid ah. Gelitaanka jardiinooyinka Tivoli Gardens ayaa ku kacaya 110 DKK qofkiiba.
Waxaan ku sii wadi karnaa sawir leh Meerisyada yar. Way u qalantaa sidoo kale. Waa mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan magaalada waxayna sanadkii 2013 dhameystirtay midkeedii ugu horreeyay boqol sano. Taalada ayaa ahayd hadiyad ka timid warshadleyda warshad khamriga soo saarta Carl Jacobsen oo la siiyay magaalada, waa shaqo uu sameeyay Edvard Eriksen, waxay ka samaysan tahay naxaas iyo dhagax adag waxaana muuqata inay ku dheehan tahay sheekada Andersen Waxaa la sheegaa in qorrax kastaa ay ka soo baxdo biyaha, kuna fadhiisato dhagaxa waxayna rajeyneysaa inay aragto gacaliyaheeda.
Gelinka dambe ee maalinta koowaad waxaan ka fekeri karnaa dukaamaysiga iyo cuntada: sidaas awgeed, ku darista dhaqdhaqaaqa magaalada, waa inaan ku dhex soconnaa Stroget, waa goobta ugu weyn ee wax laga iibsado ee Kobanheegan. Waa waddo lugeynaya oo leh dukaamo qaali ah laakiin sidoo kale aad u jaban. Tusaale ahaan, waxaa jira Prada, Max Mara, Hermes iyo Boss, laakiin sidoo kale H&M ama Zara. Waxay socotaa 1.1 kiilomitir waxayna ka tagtaa dhismaha Aqalka Dawladda Hoose illaa Kongens Nytorv.
Haddii aadan rabin inaad wax iibsato ama aysan ahayn waxaaga, weli waad socod qaadan kartaa maxaa yeelay markaad socoto oo aad ka gudubto waddooyinka kale waxaad arkaysaa xoogaa geesood oo magaalada ka mid ah. Ayaa ah Kaniisadda Our Lady, halkaasoo boqorrada qaar lagu guursaday, the Fagaaraha Gammeltorv, Ilaha Stork, kanaalka iska indhatiraya Qasriga Christianborg oo ay la socdaan Baarlamanka, Aqalka Dawladda Hoose iyo Taarahdiisa ama Tiyaatarka Royal Danish. Casho iyo sariir.
Laga bilaabo maalintii labaad waxaan ka gudbi karnaa fasaxa ilaa taariikhda. Haddii aad jeceshahay taariikhda boqorrada markaa waad booqan kartaa Qasriga Amalienborg, ayaa maanta loo beddelay matxaf. Halkan irridda ayaa lagu qabtaa badalida ilaalada, Ciidanka Boqortooyada ama Den Kongelige Livgarde. Waardiyuhu wuxuu ka socdaa xeryahooda ilaa Casten Rosenborg isagoo maraya jidadka magaalada si uu ugu dhammaado qasrigan, maalin kasta 12 duhurnimo fiiqan.
Qasriga Amelianborg asal ahaan wuxuu ka kooban yahay afar dhisme oo isku mid ah: the Qasriga Christian VII, Qasriga Frederik VIIIee Christian IX iyo taas Christian VIII. Dhismahani waa halka ay ku taalo madxafku laftiisa. Matxafkan waxaad ku arkeysaa qolalka gaarka loo leeyahay ee boqoradii ugu dambeysay iyo boqoradaha iyo qaar ka mid ah dhaqankooda.
Matxafku wuxuu raad raacaa qarni iyo badh taariikhda deenishka, laga soo bilaabo Christian IX iyo Queen Louise (afartooda ilmood waxay ahaayeen boqorro ama boqoraddii Yurub), qolalkooda aan fiicnayn, illaa maanta. Gelitaanku waa 105 DKK.
Galabtii, qadada ka dib, haddii aad jeceshahay noocyada kale ee soojiidashada ah ama aad la safreyso carruurta, waad booqan kartaa Aquarium-ka Qaranka Denmark Den Bla Planet. Dareenka ayaa ah in biyo lagu hareereeyo. Naqshadda dhismaha waxay leedahay xarun leh shan gacmood bartamaha waa meesha quraaradda ku taal, sidaa darteed waxaad dooran kartaa dariiqaaga si aad u ogaato xayawaannada qalaad ee meeshu ku hayso. Taangiga 'Oceanic Tank' waa mid cajiib ah, oo leh libaaxyadeeda dubbe, raajada manta ...
Waxa kale oo jira kalluun dhagax ah oo ay ku jiraan kalluun midab leh, aag Amazon ah oo leh shimbiro iyo dhicin, biyo-dhac weyn, iyo piranhas khatar ah. Laga soo bilaabo aquarium-ka waxaa ku yaal muuqaal qurux badan oo ku saabsan Oresund. Inaad halkaa gaarto waa wax fudud, metro-ka waxaad ka qaadaneysaa Kongens Nytrov, laba iyo toban daqiiqo gudahoodna waxaad ku imaaneysaa saldhiga Kastrup. Halkan waxaad waxoogaa uga socotaa quraaradda. Qiimuhu waa 170 DKK qofkiiba.
Waqtiga firaaqada ka dib maalinta waan la xiri karnaa Matxafka Qaranka ee Danmark. Boggan waxaa lagu soo bandhigaa waqtiyo taariikhi ah oo badan: xilligii Dhagaxa, Vikings, Da'da Dhexe, Renaissance, iyo Casriga. Waxay ku taal Qasriga Princess, dhisme qarnigii XNUMX-aad, gudahana waad booqan kartaa, marka laga reebo uruurinta, the Guriga Klunkehjemmet, Qaabka Fiktooriya, oo la mid ah tan iyo 1890. Haddii aad raacdo carruurta waa meel fiican maxaa yeelay waxaa jira qayb si gaar ah loogu talagalay iyaga, Matxafka Kid.
Matxafkan waad ku booqan kartaa adiga keligaa adigoo adeegsanaya hagitaan iyo bilaha Luulyo, Ogosto iyo Sebtember waxaa jira hagitaanno hagitaan ah oo Ingiriis ah. Ma haysaa wax yar oo lacag ah? Markaa waxaad wax ka cuni kartaa makhaayada SMÖR, oo ay ku jiraan waxyaabaha loo yaqaan 'gastronomy' ee deenishka. Gelitaanku waa 95 DKK.
Subaxdii maalintii saddexaad, quraac ka dib makhaayada u dhow, waxaan aadi karnaa meesha Wareegga Wareegga, munaarad la dhisay qarnigii XNUMXaad. Waxay u shaqaysaa sida a kormeer waana kan ugu da'da weyn Yurub. Waxaa lagu dhisay amarrada Christian IV welina waa la isticmaalaa oo waxay leedahay booqdayaal badan. Waxay leedahay a madal dibadda ah oo leh muuqaal qurux badan oo ku saabsan qaybtii hore ee Kobanheegan. Waad timid kadib markii aad fuushay jaranjarooyin qafiif ah oo ah 268 mitir iyo badh laakiin qalbiga munaaraddu waa 85,5 mitir oo bannaanka ka baxsan si aad kor ugu qaaddo 36 mitir waxaad socotaa 209 ...
Gudaha waxaa ku yaal maktabad jaamacadeed, waxaa sidoo kale booqday qoraaga caanka ah ee Andersen, iyo soo jiidasho cusub oo ka kooban a sagxad muraayad ah oo dhererkeedu yahay 25 mitir. Gelitaanku waa 25 koron qofkiiba.
Ugu dambeyntiina, had iyo jeer sida aad u kala jeceshahay, waad booqan kartaa Matxafka Qaranka ee Danmark ama SMK, the Qasriga Rosenborg leh afar qarni sharaf, Matxafka Hawada Furan ee Frilandsmuseet, mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn adduunka, Beerta Botanical, Zoo, Planetarium ama Beerta Boqorka. Xusuusnow in haddii aad iibsato ah Kaarka Dalxiiska ee Copenhagen qaar badan oo ka mid ah soojiidashadaas waa bilaash.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Copenhagen » Maxaa lagu arkaa Kobanheegan